Ayikokwakho ... | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 5, 2011 NgoMvulo, Juni 24, 2013 Douglas Karr
Kukho indawo yokutyela yaseThai eyenza umsebenzi omnandi kwiqela lezitya. Enye yezinto endizithandayo yiRed Curry yabo. Isitya sizele imifuno yaseThai kwaye sinongwe ngokwenene. Andiqondi ukuba yenye yezona zitya zidumileyo… i-Pad Thai kunye ne-Pineapple Rice Rice ibonakala ngathi ithengisa ngokungathi iphambene.
Andizange ndibone nabahlobo bam beodola iRed Curry… kwaye ndiyazi ukuba usapho lwam aluyixabisi le nto ndiyenzayo. Andiyi kuhlawula nayiphi na ingqondo, nangona kunjalo. Sonke sinokungafani okwahlukileyo. Heck, uninzi lwabahlobo bam abayi kuza nam kwivenkile yokutyela… Ukutya kwaseThai kwahluke kakhulu kubo ukuba bangavavanya.
Ke… ukuba bendizakuvula irestyu, ngekhe ibe yindawo yokutyela ebomvu. Ngokuqinisekileyo, ndingavavanya isitya ukuze ndibone ukuba umntu uyasithanda na, kodwa ukuba ndifuna ukuba indawo yokutyela ithandwe, ndiza kubeka izinto kwimenyu etsala abathengi. Uluvo lwam alubalulekanga kuba andinguye umxhasi.
Iindawo zokutyela ezinkulu mamela abaphathi babo. Bagcina iipleyiti ezithandwayo, bavavanye izitya ezintsha, kwaye baphelise ukutya okungatyiwa mntu.
Oku kunxulumene nantoni nentengiso? Ewe, libali elifanayo lokuba yiarhente. Sinabaxhasi abathanda iisayithi zabo, abawuthandayo umxholo wabo, abawuthandayo umzobo wabo… ukanti abafumani naliphi na ishishini kule ndawo. Sikwaphuhlise ii-infographics ezimbalwa zeenkampani ezingazange zenze ukukhanya kwemini, ngaphandle kokuba zintle kwaye zifundisa kakhulu. Ngoba? Kungenxa yokuba umthengi akabathandi… okanye akayithandi into ngabo.
Xa ndisiva umthengi esithi, "Andiyithandi!", Kuyacaphukisa. Ngokuqinisekileyo, kukho umba wokwoneliseka kwabaxumi ekufuneka sihlangane nawo… kodwa xa ukuthengisa ngaphakathi kungenzi naziphi na izikhokelo, ngaba uza kuqhubeka ukuxhomekeka kwizimvo zakho? Andicingi njalo, ndiye ndibaxelele ukuba inje… “Kodwa ayisiyiyo kuba wena. ”.
Ndizakuyithetha nawe lonto. Iwebhusayithi yakho ayisiyakho. Ibhlog yakho ayisiyakho. I-infographic yakho yile ayisiyakho. Iphepha lakho lokufika ayisiyakho. Intengiso yakho ngu ayisiyakho. Awuthengi isiqwenga sobugcisa oza kuxhoma eofisini yakho. Iwebhusayithi yakho lisango labakhenkethi lokufumana iimveliso kunye neenkonzo kwaye ezibakhokelela… ukusuka kulindelo ukuya kubathengi.
Ukuba unqwenela ukuphucula ukuthengisa kwakho ngaphakathi kunye nokusebenzisa ngokupheleleyo imithombo yeendaba kwi-Intanethi, kuya kufuneka uqale ukuphuhlisa iindlela zakho kunye umthengi engqondweni. Yintoni ebatsalayo? Yintoni eya kubenza bacofe? Yintoni eya kuvelisa ezinye izikhokelo? Uluvo lwakho aluyi kukusa kude kakhulu kwintengiso ekwi-Intanethi. Ukuvavanya nokumamela iindwendwe zakho kuya kuba njalo. Khumbula…
Jul 6, 2011 ngo-10: 31 AM
Ndifuna ukubeka ikopi yale posti yebhlog ngesindululo ngasinye esisibhalayo. Njengeqela loyilo, kungekudala okanye kamva siweva loo magama kumthengi, kwaye kuyaphazamisa xa sisazi ukuba silubekile uphawu.
Iposti enkulu. Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha siyonwaba kakhulu ngokwenza iprojekthi esinokuthi siyenze ngathi, eyahluke mpela kwento esifanele ukuba siyayenza. Ndabhala iposti yebhlog efanayo malunga noku kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Inomyalezo omkhulu kuyo sonke ekufuneka sive rhoqo often Izinto ezintle!